Kabayizwa eyokungcwabela uWinnie eGoli | News24
Kabayizwa eyokungcwabela uWinnie eGoli
Durban - Umndeni wengqalabutho yomzabalazo esanda kukhothama uNkz Winnie Madikizela Mandela oseMbizana e-Eastern Cape esigodini saseMbhongweni lapho azalelwa khona usukubeke kwacaca ukuthi kabayizwa kahle eyesinqumo sokumngcwabela eGoli.
Lokhu kudalulwe umzala kaMama uWinnie, uMnu Prince Madikizela okhulumela umndeni waseMbizana ukukhi bazizwa bexhoshwa libhekile ngesinqumo sokuthi umzala wakhe ayongcwatshelwa eGoli kungakhulunywanga nabo kuqala.
“Thina sizwe nje ngezindaba ukuthi umndeni wakhe oseGoli usuhlangene noMengameli uCyril Ramaphosa kwathathwa lesi sinqumo kodwa ke sesithumele umuntu wethu ukuthi ayosizwela ukuthi kwenzakaleni” kusho uMnu Madikizela.
Ukugcizelele ukuthi umndeni kawuxabani ngalesi sinqumo kodwa ingcindeni ivela emphakathini, osopolitiki, nasemamakhosini abahlaba imibuzo usuku nosuku ukuthi kungani abaholi abadabuka ezindaweni zabo begcina sebengcwatshelwa kwezinye izindawo kungaxhunyanwanga nabo.
“Phela uWinnie ubese umholi wezwe ubengasiyena owethu kepha ubese umuntu wabantu okusho ukuthi bafanele ukuba nemibuzo ngaye . UWinnie akafunwa yithina la, ufunwa AmaMpondo akubo” kudalula uMnu Madikizela.
OLUNYE UDABA: Uzongcwatshelwa eGoli uMadikizela-Mandela
Uphinde wathi okubuhlungu ukuthi izinto zaseGoli zikhohlweka kodwa uma uWinnie angangcwatshelwa eMbizana, AmaMpondo akubo ngeke amkhohlwe.
“Bheka nje u-Oliver Tambo kwababuhlungu okwenzeka kuyena ngesikhathi kwenziwa isikhumbuzo ngaye endaweni, izingane zakhe zange zilubhade, kwaba yinto eyasiphatha kabi. Kasifuni kubenjalo naku mzala wami” kuchaza uMnu Madikizela. Uphinde wathi okubuhlungu nje ukuthi kuko konke okwenziwayo indawo ekwazalelwa kuyona uWinne isesemuva kwezentuthuko, kayihambeki ngoba ayinamigwaqo futhi naye ushone elokhu ebuza ukuthi yingani abantu bendawo yakhe besadonsa kanzima nangesikhathi senkululeko.
Uqhube wathi banomhlangano ophuthumayo namuhla ekuseni futhi phakathi kwezinto abazoxoxa ngazo eyomngcwabo kaWinnie isoqhulwini.
Usihlalo we-ANC esifundeni sase-Alfred Nzo uMnu Sixolile Mehlomakhulu naye uke waphawula ngaloludaba lokuthi abaholi abalwela inkululeko abazalwa ezindaweni zabo bagcine sebengcwatshelwa eGoli. Nokho akafunanga kungeka kabanzi kuyona nakuba ezwakalise ukungenami.
Amalungiselelo esikhumbuzo sesifundazwe ngoWinnie esizobanjelwa khona kuleya ndawo ayaqhubeka.